Asetenam Nsɛm: Nneɛma Titiriw a Akɔ So Wɔ Ahenni Adwuma no Mu | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Mauritian Creole Maya Mixe Mongolian Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Zulu
Nneɛma Titiriw a Akɔ So Wɔ Ahenni Adwuma no Mu
Mildred Olson anom asɛm
Da bi nnipabɔnefo bi bɛtow hyɛɛ asɛmpatrɛwfo fie a ɛwɔ Santa Ana, El Salvador no so. Na ɛyɛ 1947. Saa bere no na Ɔwɛn-Aban Adesua rekɔ so. Nea wɔhui ara ne sɛ mmerante bi retotow abo ba dan no mu. Katolek asɔfo na na wɔhyɛ eyi akyi. Ankyɛ koraa na asɔfo yi dii basabasayɛfo bi anim baa asɛmpatrɛwfo fie hɔ. Na ebi kurakura agyatɛn, na na ebi nso kurakura ahoni. Wɔde abo boroo fie no ara nnɔnhwerew mmienu na wɔteɛteɛɛm sɛ, “Ɔbaabun no nnya nkwa daa!” na “Yehowa nwu!” Ná wɔpɛ sɛ wɔhunahuna asɛmpatrɛwfo no na wɔfi kurom hɔ. Asɛm yi sii mfe 67 ni. Nea mereka yi nyɛ bɔsrɛmka efisɛ na meka asɛmpatrɛwfo a wɔwɔ hɔ no ho. *—Hwɛ asehɔ asɛm no.
ME NE Evelyn Trabert kɔɔ Ɔwɛn Aban Gilead Bible Sukuu, na na yɛka adesuakuw a ɛto so nnan ho. Yɛwiei no, mfe mmienu akyi na nnipabɔnefo yi baa yɛn so. Saa bere no na baabi a wɔyɛ Gilead Sukuu no bɛn Ithaca, New York. Yɛwiee sukuu no, wɔma yɛkɔyɛɛ asɛmpatrɛwfo wɔ El Salvador. Metenaa hɔ bɛyɛ mfe 29. Ma menka nea ɛma mesii gyinae sɛ mɛyɛ saa adwuma no, na mewie a maka asɛmpatrɛw adwuma no nso ho asɛm kakra.
SƐNEA YƐN ABUSUA HUU NOKWARE NO
M’awofo din de John ne Eva Olson, na na wɔte Spokane, Washington, U.S.A. Wɔwoo me afe 1923. Ná m’awofo yɛ Lutheranfo nanso na wɔnnye hellgya a asɔre no kyerɛkyerɛ no ntom. Ná wɔnnye nni sɛ Onyankopɔn a ɔyɛ ɔdɔ bɛyɛ nnipa ayayade. (1 Yohane 4:8) Na me papa yɛ adwuma wɔ baabi a wɔto paanoo. Anadwo bi, ne yɔnko dwumayɛni bi ma ɔhu fii Bible mu sɛ Onyankopɔn nyɛ nnipa ayayade wɔ hellgya mu. Ankyɛ koraa na m’awofo fii ase ne Yehowa Adansefo suaa ade. Wɔhuu nea Bible kyerɛkyerɛ ankasa fa awufo ho.
Saa bere no na madi mfe nkron pɛ, nanso meda so ara kae sɛ na m’awofo ani gye nea wɔresua no ho paa. Bere a wɔhuu sɛ Onyankopɔn din de Yehowa na ɔnyɛ Baasakoro no, ɛkaa wɔn koma paa. (Yohane 8:32) M’awofo de nokware a wɔresua no kyerɛkyerɛɛ me, na me nso mesoo mu kua. Bible akenkan anyɛ me anihaw da, mmom na m’ani gye sɛ mɛsua Onyankopɔn Asɛm. Ɛwom, na mefɛre ade, nanso na metaa ne m’awofo kɔ asɛnka. M’awofo bɔɔ asu 1934, na me nso mebɔɔ asu 1939. Saa bere no na madi mfe 16.
Me ne me maame ne me papa; 1941 nhyiam a yɛkɔe wɔ St. Louis, Missouri
July 1940 no, m’awofo tɔn wɔn fie na yɛtu kɔɔ Coeur d’Alene, Idaho. Yɛn baasa nyinaa fii akwampae adwuma ase wɔ hɔ. Yɛhanee dan tenaa mu wɔ abansoro bi so, na na wɔyɛ kar ho adwuma wɔ ase. Yɛn fie na na yɛyɛ asafo nhyiam. Saa bere no, na asafo kakraa bi na ɛwɔ Ahenni Asa. Ná asafo dodow no ara han dan yɛ adesua wom anaa wɔhyia wɔ anuanom afie.
Afe 1941 no, me ne m’awofo kɔɔ nhyiam wɔ St. Louis, Missouri. Ɛda a ɛtwa to wɔ nhyiam no ase no, na ɛyɛ “Mmofra Da.” Saa da no, wɔmaa mmofra a wɔadi mfe 5 kɔsi mfe 18 bɛtenaa anim. Bere a Onua Joseph F. Rutherford rebewie ne kasa no, ɔdan n’adwene baa mmofra no so. Ɔka kyerɛɛ mmofra a yɛwɔ hɔ nyinaa sɛ, sɛ yɛgye tom sɛ “yɛbɛtie Onyankopɔn ne ne Hene no” a, yɛnsɔre nnyina hɔ. Yɛn nyinaa sɔre gyinaa hɔ. Afei Onua Rutherford kae sɛ: “Monhwɛ, Ahenni no ho adansefo foforo bɛboro 15,000 ni!” Ɛhɔ ara na mesii gyinae sɛ mede me nkwa nna a aka nyinaa bɛyɛ akwampae adwuma.
YƐN ABUSUA NO DWUMADI
Abosome kakra wɔ nhyiam no akyi no, yɛn abusua no tu kɔɔ Oxnard wɔ California anafo fam. Ahyehyɛde no kae sɛ yɛnkɔtew asafo wɔ hɔ. Kar bi na na yɛde ayɛ yɛn fie; mpa baako pɛ na na ɛsi mu. Anadwo biara na ɛsɛ sɛ yɛto me mpa wɔ pon a yɛdidi so no so. Na ɛyɛ nsakrae kɛse efisɛ yɛmmaa ha no, na me nko ara mewɔ me dan!
December 7, 1941, Japan kɔtow topae too Pearl Harbor wɔ Hawaii sɛe hɔ. Ade kyee no, United States de ne ho gyee Wiase Ko II no mu. Ɛno akyi pɛɛ na yɛkɔɔ California no. Saa bere no na Japanfo akohyɛn nam nsu ase wɔ mpɔtam hɔ, enti atumfoɔ no hyɛɛ mmara sɛ wɔn a wɔtete mpoano nyinaa nnunnum wɔn nkanea anadwo. Esum kabii yi nti, na ɛyɛ den ma Japanfo no sɛ wɔbɛhu baabi a wɔbɛtow atopae agu.
Abosome kakra akyi wɔ September 1942 no, yɛkɔɔ Wiase Foforo Teokrase Nhyiam wɔ Cleveland, Ohio. Meda so ara kae kasa a Onua Nathan H. Knorr mae no. Asɛmti no ne “Asomdwoe—So Ɛbɛkyɛ?” Ɔkaa nkɔmhyɛ bi a ɛwɔ Adiyisɛm ti 17 ho asɛm. Nkɔmhyɛ no fa ‘aboa a ɔwɔ hɔ, nanso onni hɔ, na ɔrebefi amoa donkudonku no mu apue’ no ho. (Adiyisɛm 17:8, 11) Onua Knorr kyerɛkyerɛɛ mu sɛ ‘aboa no’ ne Amanaman Apam a n’adwuma baa awiei wɔ ɔko no mu no. Afei ɔkae sɛ wiase no de asomdwoe ahyehyɛde foforo bɛsi Amanaman Apam no ananmu na asomdwoe kakra aba. Saa pɛpɛɛpɛ na ɛsii. Wiase Ko II no baa awiei 1945. Ɛno akyi no, wɔde Amanaman Nkabom no sii Amanaman Apam no ananmu. Ɛfi saa bere no, Yehowa Adansefo de ahokeka kaa Ahenni no ho asɛmpa wɔ asase so baabiara. Ampa, yɛhu sɛ yɛn dodow abu abɔ ho bebree!
Adansedi krataa a menyaa wɔ Gilead
Saa nkɔmhyɛ no boaa me ma mehuu sɛ na adwuma pii da yɛn anim. Enti bere a anuanom de too gua sɛ afe a ɛdi hɔ no Gilead sukuu bɛfi ase no, meyɛe sɛ mɛkɔ sukuu no bi na mabɛyɛ ɔsɛmpatrɛwfo. Afe 1943 no, wɔma mekɔyɛɛ akwampae adwuma wɔ Portland, Oregon. Saa bere no, yɛkɔ asɛnka a na yɛde gramafon bɔ Bible mu nsɛm kyerɛ afiewuranom wɔ wɔn aboboano; yɛwie a na yɛama wɔn asafo nhoma a ɛka Onyankopɔn Ahenni ho asɛm. Mekɔɔ so dwen asɛmpatrɛw adwuma no ho afe mũ no nyinaa.
Afe 1944 no, me ne m’adamfo Evelyn Trabert nsa kaa krataa sɛ yɛnkɔ Gilead Sukuu. Ɛyɛɛ me dɛ paa sɛ wɔtoo nsa frɛ yɛn! Yɛde abosome nnum na ɛkɔɔ sukuu no, na akyerɛkyerɛfo no kyerɛɛ yɛn ɔkwan a yɛbɛfa so asua Bible ate mu dɛ. Akyerɛkyerɛfo no ahobrɛase kaa yɛn koma paa. Ɛtɔ da bi a na akyerɛkyerɛfo no ara som yɛn bere a yɛredidi. Yɛwiee Gilead Sukuu January 22, 1945.
Me ne Evelyn, ne Leo Mahan ne ne yere Esther, kɔduu Santa Ana, El Salvador June 1946. Na afuw no “ahoa sɛ wotwa.” (Yohane 4:35) Bere a yɛdii abosome kakra no, yɛkɔɔ ɔmansin nhyiam a ɛdi kan wɔ Santa Ana. Yɛtoo nsa frɛɛ nkurɔfo sɛ wɔmmetie bi, na nnipa bɛyɛ 500 bae. Yɛn ani gyei papaapa. Asɛmpaka adwuma a na yɛreyɛ no hyɛɛ asɔfo no abufuw paa. Yɛwiee nhyiam no, ne nnawɔtwe na wɔbɔɔ nkurɔfo paa ma wɔbɛdii atuntunasɛm a yɛkaa ho asɛm mfiase no. Na wɔpɛ sɛ wɔbɔ yɛn ntrɛnee na yɛfi kurom hɔ kɔ. Nanso ɛno mpo koraa na ɛhyɛɛ yɛn mpamden sɛ yɛntena hɔ mmoa nkurɔfo no. Ɛwom, na asɔfo no aka akyerɛ wɔn sɛ mma wɔnnkenkan Bible, na na nnipa dodow no ara nso nni sika a wɔde bɛtɔ bi, nanso na wɔn mu pii pɛ sɛ wɔhu nokware no. Na yɛresua Spanish kasa na yɛatumi akyerɛ wɔn onii ko a Yehowa yɛ ne ɛbɔ a wahyɛ sɛ ɔbɛyɛ asase paradise no. Nkurɔfo huu saa no, na ɛyɛ wɔn dɛ.
Wɔde yɛn a yɛkɔɔ Gilead no mu nnum kɔɔ El Salvador. Fi benkum kɔ nifa: Evelyn Trabert, Millie Brashier, Esther Mahan, me, ne Leo Mahan
Bible asuafo a medii kan nyaa wɔn no baako ne Rosa Ascencio. Ná ɔne ɔbarima bi na ɛte, nanso na ɔnwaree no. Bere a Rosa fii ase suaa Bible no, ɔtwee ne ho fii ɔbarima no ho. Afei ɔbarima no nso fii ase suaa Bible, na wɔwaree. Akyiri yi wɔbɔɔ asu bɛyɛɛ Yehowa Adansefo, na na wɔmfa wɔn som nni agorɔ koraa. Rosa ne daa kwampaefo a ɔdi kan wɔ Santa Ana. *—Hwɛ asehɔ asɛm no.
Ná Rosa yɛ sotɔɔ ketewa bi. Sɛ ɔrekɔ asɛnka a ɔto sotɔɔ no mu, na na ɔwɔ awerɛhyem sɛ Yehowa bɛma ne nsa aka nea ɔhia. Bere biara a Rosa bɛbue sotɔɔ no na nnipa bɛtɔ ade. Ɔhuu sɛ Yehowa rehwɛ no sɛnea waka wɔ Mateo 6:33 no. Rosa kɔɔ so som Yehowa nokwaredi mu kɔsii ne wu mu.
Ná asɛmpatrɛwfo a yɛwɔ hɔ no mu nsia han owura guadini bi dan. Da bi ɔsɔfo bi kɔɔ owura no hɔ kɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ wannye dan no amfi yɛn nsam a, wɔbɛpam ɔne ne yere afi asɔre no mu. Ɔsɔfo no asɛm ammɔ owura no hu koraa, efisɛ na asɔfo no ayɛ nneɛma bi a ɛyɛ no ahi. Enti owura no ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ wɔpam no fi asɔre no mu a ɛmfa ne ho. Ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ yɛbɛtumi atena fie hɔ bere tenten biara a yɛpɛ.
OWURA NUONYAMFO BI BƐYƐƐ ƆDANSEFO
Baa dwumadibea a wɔsii no 1955
Ɔsɛmpatrɛwfo foforo ne engineer bi a ne din de Baltasar Perla yere suaa ade wɔ ɔman no ahenkurow, San Salvador. Ná owura no nnye Onyankopɔn nni efisɛ ɔhuu sɛ asɔfo no pii yɛ nyaatwom. Nanso na ne yam ye. Ɛwom sɛ na ɔnnya mmɛyɛɛ Ɔdansefo, nanso bere a Adansefo no rebesi baa dwumadibea wɔ El Salvador no, ɔkae sɛ ɔde ne nimdeɛ bɛboa ma wɔasi dan no. Ɔyɛɛ saa a wannye kaprɛ mpo.
Bere a wɔresi baa dwumadibea no, Baltasar ne Adansefo pii yɛɛ adwuma na ɔgye dii sɛ wahu nokware som. Ɔbɔɔ asu July 22, 1955, na ankyɛ koraa na ne yere Paulina nso bɔɔ asu. Wɔwɔ mma mmienu a wɔresom Yehowa denneennen. Wɔn babarima a ne din de Baltasar, Jr. asom wɔ New York Betel mfe 49 ni. Ɔboa asɛnka adwuma a yɛreyɛ wɔ wiase nyinaa no, na ɔka United States Baa Boayikuw no ho. *—Hwɛ asehɔ asɛm no.
Bere a yɛfii ase yɛɛ nhyiam akɛse wɔ San Salvador no, Onua Perla na ɔboaa yɛn ma yɛnyaa agodidan kɛse bi a yɛbɛtumi ahyia wɔ hɔ. Bere a ɛdi kan a yɛkɔɔ hɔ no, nnipa kakraa bi na wɔbae, enti na nkongua pii deda hɔ. Nanso afe biara na nnipa no bi bɛka ho, na afei ɛduu baabi no na yɛnkɔ dan no mu mpo. Yɛhuu sɛ Yehowa ahwie ne nhyira agu yɛn so. Nhyiam a ɛte saa ase no, na metaa hyia wɔn a me ne wɔn asua Bible. Nea na ɛma m’ani gye kɛse koraa ne sɛ mɛhu sɛ wɔn a me ne wɔn suaa Bible no nso asuafo rebɔ asu! Ná mefa no sɛ Adansefo foforo yi yɛ me nananom.
Onua F. W. Franz rekasa akyerɛ asɛmpatrɛwfo wɔ nhyiam bi ase
Da bi onua bi baa me nkyɛn wɔ nhyiam bi ase bɛka kyerɛɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔpa me kyɛw. Na mennim no, na na menhu nea ɔrepɛ akyerɛ. Ɔkae sɛ, “Ɔka mmerante a wɔpaa me abo wɔ Santa Ana no ho.” Hwɛ m’ani gye a ɛgyee sɛ mehuu sɛ ɔne me resom Yehowa seesei. Saa nkɔmmɔ no sii so dua maa me sɛ bere nyinaa som adwuma no yɛ adwuma bi a woyɛ a na wontoo wo ho ngui.
Ɔmansin nhyiam a yɛdii kan kɔe wɔ El Salvador
ME KOMA TƆƆ ME YAM
Meyɛɛ asɛmpatrɛw adwuma no wɔ El Salvador bɛyɛ mfe 29. Mesomee wɔ Santa Ana, Sonsonate, Santa Tecla, ne San Salvador. Saa bere no nyinaa na m’awofo renyin, enti na ɛhia sɛ mekɔboa wɔn. Mebɔɔ asɛm no ho mpae mpɛn pii, na 1975 mu hɔ no, mesii gyinae sɛ mɛgyae asɛmpatrɛw adwuma no asan akɔ Spokane.
Me papa wui 1979. Saa bere no na me maame nso ayɛ mmerɛw, na metenaa ne ho mfe nwɔtwe kɔsii sɛ ɔno nso wui; na wadi mfe 94. Ɔbrɛ ne awerɛhow maa meyɛɛ hahaaha. Yare bi a ɛde ananse yɛɛ me, na na ɛyɛ yaw paa. Nanso Yehowa annyaw me mu; ɛte sɛ nea daa ne nsa da me kɔn mu rekorɔkorɔ me. Ɔtiee me mpaebɔ na ɔboaa me maa me ahoɔden de gyinaa tebea no ano. Yehowa adi ne bɔhyɛ so, na me mpanyinyɛ mu mpo, ɔda so ara hwɛ me.—Yesaia 46:4.
Afe 1990 no, metu kɔɔ Omak, Washington. Ná nnipa pii wɔ hɔ a wɔka Spanish kasa, na meyɛɛ asɛnka adwuma no wɔ hɔ. Nokwasɛm ni na ɛyɛ me dɛ sɛ Yehowa da so ara de me redi dwuma. Wɔn a me ne wɔn sua Bible no pii bɔɔ asu. Ɛduu baabi no na ayɛ den ama me sɛ mɛsiesie fie a mete mu wɔ Omak no. Enti November 2007 no, mepɛɛ baabi korokorowa bi kɔhyɛe wɔ Chelan, Washington. Spanish asafo a ɛwɔ ha no nto me agyaagyaamu koraa, na m’ani sɔ paa. Adansefo a wɔwɔ ha deɛ, me nko ara ne aberewa, enti anuanom afa me sɛ wɔn nanabea.
Sɛnea ɛbɛyɛ a mɛtumi de me bere nyinaa asom Yehowa nti, mesii gyinae sɛ merenware na mawo mma. (1 Korintofo 7:34, 35) Mehuu sɛ ɛnyɛ biribiara na mɛtumi anya wɔ wiase yi mu; ɛsɛ sɛ mede nneɛma bi bɔ afɔre. Nea ɛsi m’ani so ne sɛ mede me koma nyinaa bɛsom Yehowa, efisɛ ɛno ne ade a ɛhia paa wɔ asetenam. Maboa nnipa pii ma wɔahu nokware no, na wɔabɛyɛ me mma. Mekɔ wiase foforo no mu a, mɛnya bere pii ayɛ nea mepɛ biara. Kyerɛwsɛm a ɛda me koma so paa ne Dwom 145:16. Yehowa ama yɛn awerɛhyem sɛ ɔbɛma ‘ateasefo nyinaa anya nea wɔpɛ.’
Akwampae adwuma no ama mayɛ sɛ ababaa, na ɛma mehu sɛ me so wɔ mfaso
Seesei madi mfe 91 na meda so ara wɔ ahoɔden kakra, enti megu akwampae adwuma no so. Akwampae adwuma no ama mayɛ sɛ ababaa, na ɛma mehu sɛ me so wɔ mfaso. Bere a mekɔɔ El Salvador no, na afei koraa na asɛnka adwuma no afi ase wɔ hɔ. Nanso seesei El Salvador anya adawurubɔfo bɛboro 39,000. Menim sɛ nea Satan bɛyɛ biara no, ɔrentumi mma adwuma no ngu. Nkɔso a aba yi ahyɛ me gyidi den paa. Eyi ama mahu paa sɛ Yehowa honhom kronkron na ɛbɔ ne nkurɔfo kyidɔm.
^ nky. 4 Hwɛ 1981 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, kratafa 45-46.
^ nky. 19 1981 Yearbook, kratafa 41-42.
^ nky. 24 1981 Yearbook, kratafa 66-67, 74-75.